» DEG DEG:MD Xasan hada Muqdisho kusoo bandhigay Cududiisa siyaasadeed iyo xildhibaanada oo heysto garaayo ilaaBadweyntimes.com
Ayadoo olalaha doorashada madaxweynaha soomaaliya mareyso meeshii ugu adkeyd kadib markii musharixiinta soo bandhigayaan awoodooda siyaasadeed ayaa haatan waxa kulan qado ah kuleh hotelka weyn ee SYL xildhibaano tageersan Xasan Sheekh.
Xildhibaanadaan ayaa lasheegaya in ay gaarayaan ilaa 211 xidlhibaan kuwaasi oo isgu jira labada aqal ee barlamaanka soomaaliya.
Musharax madaxweyne Xasan Sheekh ayaa weli ah shaqsiga ugu horeeyo doorashada waxaana taasi muujineysaa in oo heysto codadka ugu badan xildhibaanada labada aqal.
Dhinaca kale Musharaxiinta kale ee is bedel doonka ayaa iyana diyaar garow wada, waxaa ay kulamo ku lahaayeen Hotelka Jazeera, xildhibaano iyo dad kale ayay kulamo la lahaayeen.
In ka badan 20-saacadood ayaa ka harsan doorashada Madaxwyenaha, waxaana caawa ay tahay habeen aan la wada seexan doonin, ololaha iyo kulamada ay wadaan Musharaxiintana waxay noqon doonaan kuwo aan joogsi laheyn.
« Warbixinta Ka HoreysayDEG DEG: Mid kamid ah Musharaxiinta Xilka M/weynaha oo Xabsiga la dhigay..
Warbixinta Xigto »AKHRISO: Al shabaab oo Agagaarka VILLA Somalia ku daadiyay Warqado Digniin ah…